RetroPie: Raspberry Pi-gaaga u rogo mashiin dib-u-ciyaar ah | Qalabka bilaashka ah
RetroPie: Raspberry Pi u noqo mashiin dib loo dhigo
Haddii aad jeceshahay ciyaaraha fiidiyowga ee 'retro video', kuwaa cajiibka ah ee cajiibka ah ee aan waligood ka bixin qaabka, markaa hubaal waxaad tahay qof raadinaya dhammaan kuwa emulators-ka xiisaha leh iyo mashaariicda ka soo baxaya agagaarka Raspberry Pi. Mid ka mid ah mashaariicdaas oo lagu raaxeysto dib-u-magacaabiddu waa RetroPie, oo aan soo bandhigi doono furayaasha oo dhan.
Runtu waxay tahay inay jiraan xiiso dheeraad ah oo noocan oo kale ah, tan iyo cbulshada adeegsadayaashu waxay jecel yihiin ciyaartooydan fiidiyowga ah ka dhufto ee la soo dhaafay ma joojin koritaanka. Xaqiiqdii, xitaa soo saarayaasha qaar sida SEGA ama Atari waxay go'aansadeen inay siiyaan qaar ka mid ah mashiinadooda hore fursad labaad oo ay ku daboolaan baahidan weyn ...
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiisaynayso inaad ogaato emulators ugu fiican loogu talagalay Raspberry Pi, iyo sidoo kale mashaariic kale sida RecalBox y batocera. Iyo sidoo kale qalabka qaar ee loogu talagalay kantaroolayaasha si ay u abuuraan adiga kuu gaar ah mashiinka arcade.
1 Waa maxay RetroPie?
1.1 Madal lagu daydo
2 Sideen kuheli karaa RetroPie?
2.1 Aad ufudud (isticmaalayaasha layliska)
2.2 Raadi ROMs
3 Kudarrada la heli karo
Waa maxay RetroPie?
RetroPie waa mashruuc ka mid ah il furan si gaar ah loogu talagalay in SBC-gaaga looga dhigo xarun ciyaarta fiidiyowga ee Retro, taas oo ah, mashiin dhab ah oo ciyaarta Retro ah. Intaa waxaa dheer, waxay ku habboon tahay looxyada sida Raspberry Pi noocyadeeda kala duwan, laakiin sidoo kale kuwa kale ee la midka ah sida ODroid C1 iyo C2, iyo xitaa kombuyuutarrada.
Tan iyo markii loo yaqaan 'RetroPie 4.6 version', taageerada Raspberry Pi 4 sidoo kale waa lagu soo daray
Mashruucani wuxuu ku dhismayaa mashaariic kale oo caan ah oo hore loo ogaa sida Raspbian, EmulationStation, RetroArch, Kodi iyo kuwa kale badan oo jira. Waxaas oo dhan waxaa lagu soo ururiyey hal mashruuc oo meel dhexe ah si ay kuugu deeqaan madal dhammaystiran oo fudud si aad kaliya uga walwasho ciyaarista ciyaaraha aad ugu jeceshahay Arcade.
Laakiin haddii aad tahay isticmaale horumarsan, sidoo kale waxaa ku jira wax weyn qalabyada qaabeynta kala duwan si aad wax uga beddeli karto oo aad u habeyn karto nidaamka ku dhowaad sida aad rabto.
Madal lagu daydo
RetroPie way ku dayan kartaa in ka badan 50 dhufto ee ciyaarta fiidiyowga ah markaa waxaad u isticmaali kartaa ROM-yada cayaartooda inaad dib ugu soo nooleeyaan maanta. Kuwa ugu caansan waa:
Sideen kuheli karaa RetroPie?
Waxaad awoodi kartaa soo dejiso RetroPie gebi ahaanba bilaash ah ka socota bogga rasmiga ah ee mashruuca. Laakiin ka hor intaadan ku degdegin, waa inaad maanka ku haysaa in RetroPie ay u shaqeyn karto dhowr siyaabood:
Ku rakib nidaam shaqeynaya oo jira, sida Raspbian. Macluumaad dheeraad ah oo loogu talagalay Rasbiyaanka y Debian / Ubuntu.
Ka bilow sawirka RetroPie ee xoq ah kuna dar barnaamij dheeri ah.
Marka laga reebo adeegsigaan, tallaabooyinka la raacayo si aad ugu rakibtid RetroPie xoqida SD waa waxyaabaha soo socda:
Degso sawirka de RetroPie oo u dhiganta nooca Pi-gaaga.
Hadda waa inaad ka soo saartaa sawirka isku-dhafan ee .gz. Waxaad ku sameyn kartaa amarrada Linux ama barnaamijyada sida 7Zip. Natiijadu waa inay ahaato fayl leh .img kordhin.
Kadib isticmaal barnaamij si aad u awoodo qaab SD oo u gudbi sawirka by Caweyska Dalmar Waad ku samayn kartaa adiga Etcher, kaas oo sidoo kale la jaan qaada labada Windows, macOS iyo Linux. Tani waa nidaam isku mid ah dhammaan.
Hadda geli kaarka SD-gaaga Raspberry Pi oo bilaw.
Markaad bilowdo, u gudub menu-dejinta qaybta WiFi si aad ugu xirto SBC-kaaga shabakada. U habee adabtarada isku xidhka shabakaddaada, maadaama laga yaabo inaad leedahay guddi duug ah oo leh adabtarada USB-ga ah ee USB, ama waxaa laga yaabaa inaad haysato Pi oo leh WiFi isku dhafan, ama waxaa kugu xiri kara fiilada RJ-45 (Ethernet). Waa inaad doorataa ikhtiyaarkaaga kuna xirnaataa shabakaddaada caadiga ah.
Haddii aad doorbideyso, in kastoo aysan daruuri ahayn kiisaska badankood, waxaad rakibi kartaa barnaamij dheeri ah ama emulators ka badan.
Marka la gaaro, waxyaabaha soo socda ayaa ah isku xir xakamayntaada ama maamulayaasha ciyaarta, haddii aad haysato. Si tan loo sameeyo, talaabooyinka waa:
Ku xir kumbuyuutarrada USB inaad haysato Waxaa jira xakameyaal badan oo la jaan qaadi kara RetroPie on Amazon. Tusaale ahaan QUMOX ama inNEXT.. Xitaa waad isticmaali kartaa ilaaliyaal cusub.
Marka lagu xidho, RetroPie waa inay si otomaatig ah u bilawdaa a interface si ay u iyaga configures. Dhexdeeda, waxay ku weydiin doontaa adiga ficillo taxane ah oo ku saabsan kaaliyaha ay tahay inaad raacdo. Haddii aad khalad samayso, ha ka welwelin, waxaad marin ka heli kartaa menu ka dib si aad wax uga beddelo qaabeynta adigoo riixaya Start ama F4 oo dib u bilaabaya.
Intaa ka dib waxaad sameyn karto waa mari ROM-yada si aad uhesho cayaaraha fiidiyowga aad ugu jeceshahay inaad diyaar u ahaato inaad ka sameysid Raspberry Pi. Waxaad ku sameyn kartaa dhowr siyaabood, mid waa SFTP (xoogaa aad u dhib badan), iyada oo loo marayo Samba (sidoo kale xoogaa shaqo badan), iyo tan kale waa iyada oo loo marayo USB (ka fudud oo la doorbido badankood). Xulashada USB:
Adeegso xusuusta pendrive ama USB-ga oo horey loogu qaabeeyey FAT32 ama NTFS. Labaduba way adeegaan.
Gudaha waa inaad ku abuurtaa a galka loo yaqaan «retropie» oo aan lahayn calaamado oraah.
Hadda si nabad ah uga fura USB-ga oo geli a Dekada USB ee Raspberry Pi. Isaga tag ilaa ay ifineyso ilaysku.
Hadda ka fur USB-ga Pi-ga mar labaad oo ku dheji kombuyuutarkaaga mari ROM-yada gudaha galka dib-u-haynta / roms. Haddii ROM-yada la tuujiyo, waxaad u baahan doontaa inaad kala furfurto si ay u shaqeeyaan. Waxa kale oo aad ku abuuri kartaa faylal gudaha roms-ka si aad u liisteeysato ROM-yada adigoo adeegsanaya madal, tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa galka la yiraahdo nes ee ciyaaraha Nintendo NES, iwm.
USB-ga dib ugu xiro Pi-gaaga, sug laydhku inuu joojiyo dhalaalka.
Hadda cusbooneysii EmulationStation adoo dooranaya dib uga bilow menu-ga weyn.
Oo hadda waxaa jira oo keliya ciyaarta bilawThe Jidka, si aad uga baxdo ciyaar aad dhex gasho, waxaad isticmaali kartaa badhanka Start iyo Select oo aad riixday isla mar ahaantaana mashiinkaaga ciyaarta wuxuuna ku laaban doonaa menu-ka weyn ee RetroPie…
Aad ufudud (isticmaalayaasha layliska)
Si ma rabto in aad noloshaada ku adkaato wax badan leh ROM-yada ama rakibaadda 'RetroPie', waa inaad ogaataa inay horey u iibiyaan kaararka SD-ka ee nidaamkan lagu rakibay, marka lagu daro kumanaan ROM ah oo horey loogu soo daray ...
Tusaale ahaan, gudaha Amazon mid iibiya 128GB kaarka microSD awoodda astaanta Samsung iyo taas oo horeyba loogu soo daray RetroPie, iyo sidoo kale in ka badan 18000 oo ah fiidiyowga fiidiyowga ee ROM-ka oo horey loogu soo daray.
Xusuusnow inay jiraan bogag badan oo internetka ah oo oggolaanaya soo dejiso ROM-yada sharci darro ah, maadaama ay yihiin cayaaro fiidiyow oo lahaansho leh. Sidaa darteed, waa inaad ku kacdaa halistaada, adoo ogsoon inaad dambi ka geysan karto hantida aqooneed.
Sidoo kale, gudaha Internet Archive sidoo kale waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah ROM-yada ciyaarta fiidiyowga oo aad u gaboobay Dabcan adiguba waad leedahay ROM-yada gebi ahaanba bilaash ah waana sharci haddii aad iyaga rabto, sida kuwa MAME.
Kudarrada la heli karo
Waa inaad ogaataa inay jiraan tiro badan oo ah Mashaariicda DIY si aad u abuurto mashiinkaaga Arcade ee raqiiska ah iyo kan yar ee loo yaqaan 'Raspberry Pi', iyo sidoo kale inaad dib ugu cusbooneysiiso qunsuliyado kale oo badan oo la soo dhaafay qaab fudud. Tan awgeed, RetroPie waxay sidoo kale ku siineysaa dukumiintiyo xiiso leh:
DIY loogu talagalay qolofka acrylic
Laakiin taasi maahan waxa kaliya ee aad ku haysatid farahaaga, iyaguna way jiraan xirmooyin aad u xiiso badan inaad iibsan karto si aad isugu soo uruuriso qalabkaaga qunyar-socodka ah qaab fudud:
GeekPi qolof ku-meel-gaar ah oo loo yaqaan 'Conro console shell' oo u eg SuperCOM
NESpi Waa kiis kale oo ku dayanaya sheekooyinka quraafaadka ah ee Nintendo NES
Owootec kiis GameBoy-u eg Raspberry Pi Zero
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Raspberry Pi » RetroPie: Raspberry Pi u noqo mashiin dib loo dhigo
Odroid N2: SBC kale oo wanaagsan oo loo yaqaan 'Raspberry Pi'